कसरी औषधि एजेन्ट र राष्ट्रिय व्यञ्जनहरु को मद्दतले घरमा जुम्रा ल्याउन?
घरमा कसरी जुम्रा ल्याउन सबैले थाह छ। आखिर, आज केही मान्छे जुम्रा ग्रस्त। तर तपाईं वा तपाईंको प्रियजनलाई अझै पनि त्यसपछि यो अप्रिय रोग, संक्रमित छ भने देखि यो उन्मुक्ति छिटो हुनुपर्छ। यो जोडतोडले रोग अर्को एक व्यक्ति देखि पारित गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने तथ्यलाई देखि stems।
जुम्रा को प्रकार र आफ्नो समाधान
केही मानिसहरू थाहा छ, तर केवल मानिसहरूले तर पनि यसको लेख को मामला मा जुम्रा विभिन्न प्रकार छन् र बाँचिरहेका छौं। यो महामारी को छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी सामना गर्न हामी थप विवरण मा प्रस्तुत रोग प्रत्येक प्रकार विचार गर्नुहोस्।
यो जुम्रा सामान्यतया seams बसोबास र वस्त्र को Folds। त्यो उनको अन्डा, साधारण मान्छे भनिन्छ लीख s जो कर्तुतहरूलाई उदाङ्ग भन्ने थियो। यो घरेलू वस्तुहरू मार्फत कि उल्लेख गर्नुपर्छ जुम्रा उहाँले एक सहन नसकिने खुजली र बलिरहेको छ भनेर, पुरुषहरु मा पारित। अक्सर, पेट, armpits, कमर, काँध मा संक्रमित कीराहरूको खानको, को कमर र तिध्रा बिचको भाग र माथिल्लो फिर्ता मा Folds। तपाईं घरमा जुम्रा ल्याउन अघि, तपाईं सबै लुगा, सङ्कलन गर्नुपर्छ उसिनेर गर्न सकिन्छ कि एक मा यो विभाजन र एक "एक-औसत" वा "Medifoks" को माध्यम द्वारा उपचार गर्न। कि पछि, अपार्टमेन्ट मा आवश्यक वसन्त सफाई खर्च गर्न आवश्यक छ।
यी परजीवी, को perineum स्थित बाल गर्न आफूलाई संलग्न छाला पियर्स र त्यसपछि मानव रगत खान्छन्। तपाईं पक्रेको छ भने गुप्तांग जुम्रा, त्यसपछि पक्कै पनि तपाईं को प्रश्न रुचि हो घर मा टाउको जुम्रा प्राप्त गर्न कसरी। यो perineum मा र armpits सबै दाढी बाल आवश्यक छ, र त्यसपछि छाला लोशन हंगेरी "Nittifor", 5% बोरिक लेप, 10% सफेद पारा लेप वा lontsidomom व्यवहार गर्छन्। यो प्रक्रिया धेरै पटक बाहिर गर्नुपर्छ। साथै, यो आफ्नो सबै अंडरवियर र ओछ्यान तन्ना कीटाणुरहित गर्न आवश्यक छ।
टाउको जुम्रा कसरी ल्याउन?
यस प्रकारको भन्दा साधारण कीराहरूको छ। यस्तो जुम्रा बाँच्न र टाउको मा प्रकार। यस मामला मा, जुम्रा एक विशेष टास्ने प्रयोग गरेर कपाल सापट गर्न लीख s, आफ्नो अन्डा संलग्न गर्नुहोस्। यो परजीवी को छुटकारा प्राप्त गर्न आधुनिक हुनुपर्छ कीटनाशक। तर तपाईं घरमा जुम्रा ल्याउन अघि, दबाइ एजेन्ट प्रयोग गरेर यसलाई आवश्यक यस्तो विधिहरू गर्भवती र lactating महिलाहरु मा contraindicated छन् कि सम्झना छ, ब्रोन्कियल ट्यूब र फोक्सोमा को रोगहरु संग पहिलो वर्ष मुनिका बच्चाहरु, साथै एलर्जी, asthmatics र मान्छे। यस मामला मा, यो लोकप्रिय व्यञ्जनहरु प्रयोग गर्न अर्थमा बनाउँछ।
Cranberry रस। 10 दिनको लागि हरेक दिन खोपडी र कपाल मा Cranberry रस rubbed गर्नुपर्छ र त्यसपछि राम्रो कपाल comb र पन्ध्र मिनेट छोड्नुहोस्।
Rosemary र hellebore। दुवै प्रतिनिधित्व जडिबुटी बराबर अनुपात मा मिश्रित गर्नुपर्छ, सुंगुरको बोसो तिनीहरूलाई थप्न जिद्दी र त्यसपछि परिणामस्वरूप ठूलो टाउको चिल्लो गर्न आधा एक दिन।
वनस्पति तेल। यो प्रशस्त मात्रामा हुन कुनै पनि वनस्पति तेल मा छाला र कपाल चिकनाना गर्नुपर्छ, बाहिर लीख s सानो शिखा comb गर्न टाउको सिलोफन र केही घण्टा र्याप।
अब तपाईं अर्थ के तपाईं टाउको, perineum, र घरेलू वस्तुहरूबाट जुम्रा को छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छन् थाहा छ।
बच्चा मा Enuresis: के?
टाउको दुखाइ र heaviness कसरी हटाउन
एक प्रारम्भिक उमेर मा केटाहरू मा Inguinal हर्निया
कसरी जीवाणु संक्रमण बाट भाइरल भेद गर्न? कसरी परिभाषित गर्न - भाइरल वा जीवाणु संक्रमण?
पागलपन: कति वर्ष बाँच्ने? लक्षण, विकास चरण र रोगहरु को प्रकार: मा वृद्ध पागलपन
अनुकूलता: क्यान्सर-महिला, मानिस-तुला
आधुनिक IOS र-emulator
"Oftolik" खस्छ: समीक्षा, मूल्यहरू प्रयोग र analogues लागि निर्देशन
कसरी घरमै गहिराइको उपचार गरौं
Gestation को 8 सप्ताह मा गर्भपतन
मशरूम सुखाने: मुख्य तरिका
कस्मेटिक उत्पादन "टनिक" - रङ्ग बाम। कसरी प्रयोग गर्ने?
गाउट के हो?
अपरंपरागत फूड्स - सहायता किसान
कसरी शब्दांशहरू द्वारा पढ्न छोराछोरीलाई सिकाउन। आधारभूत प्रविधी र सिफारिसहरू
व्यवस्थाको आवेदन - विद्यमान कानून को वैध प्रयोग आधार
टमाटर संग तातो र चिसो gazpacho सूप: नुस्खा